ဒူးရငျးသီး ကွိုကျသူမြား သတိပွုစရာ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
18 Oct 2020 1:40 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
13862 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အသှားမတျောတဈလှမျး အစားမတျောတဈလုတျ’ ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ အစားအသောကျ စားသုံးရာမှာ အခနျ့မသငျ့ရငျ ဒုက်ခရောကျတတျတာကိုဖျောပွနတောပဲဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ရာသီစာဖွဈတဲ့ ဒူးရငျးသီးဟာ အစားမတတျရငျဘေး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒူးရငျးသီးဆိုတာက အသီးတကာတို့ရဲ့ဘုရငျလို့တငျစားရလောကျအောငျ အနံ့အရသာ ပွညျ့စုံရုံမြှမက အားအငျဖွဈစနေိုငျသော သဈသီးတဈမြိုးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒူးရငျးသီးဟာ မွနျမာနိုငျငံတှငျသာမက ထိုငျးနိုငျငံ၊မလေးရှား နိုငျငံတို့မှနပွေီးအမြားဆုံးထှကျရှိကာ လူကွိုကျမြားသော သဈသီးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒူးရငျးသီးဟာ စားတတျရငျအားအငျဖွဈထှနျးသလို မစားတတျရငျ မွှထေကျတောငျ အဆိပျပွငျးတဲ့ အသီးလို့လညျး ပွောလို့ ရပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံသို့ အလညျအပတျသှားရောကျသော နိုငျငံခွားသားတဈဦး ဒူးရငျးသီးအစားမတတျတာကွောငျ့ အသကျ ဆုံးရှုံးသှားရသော ဖွဈရပျတဈခုလညျးဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ကမ်ာဘလှညျ့ ခရီးသညျဟာ အသကျ ၂၉ နှဈသာရှိသေးပွီး ဒူးရငျးသီးကိုကွိုကျနှဈသကျတာကွောငျ့ အမြားကွီး စားသုံးခဲ့ကာ နှားနို့ နှငျ့ ကျောဖီကိုလညျး သောကျသုံးခဲ့သောကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဒူးရငျးသီးနှငျ့ နှားနို့ပေါငျးစပျလိုကျပါကသှေးပေါငျခြိနျအလှနျတကျသှားပွီး ရှော့ချဖွဈကာသဆေုံးရခွငျးဖွဈတယျလို့ ဆေးစဈခကျြမြားအရ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဒူးရငျးသီးကို စားသုံးပွီး ၈-နာရီအတှငျး နို့ထှကျအစားအသောကျမြားကို မစားသုံးဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
ထို့အပွငျ ဒူးရငျးသီးနှငျ့အတူ တှဲဖကျမစားသငျ့တဲ့ အစားအသောကျမြားကတော့ အရကျ၊ ကိုကာကိုလာနှငျ့ လိုငျခြီးသီးမြား ဖွဈပွီး စားသုံးမိပါက အသကျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ဒီလိုဖွဈရတာလဲ? ဗဟုသုတရအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဒူးရငျးသီးနှငျ့အရကျတှဲဖကျမစားသုံးသငျ့ပါဘူး။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ နှဈခုစလုံး အပူစာတှဖွေဈတာကွောငျ့ သာမနျလူမြားသာမက သှေးတိုးနှငျ့ ဆီးခြိုရှိသူမြားဆိုရငျ ဦးနှောကျ သှေးကွောပွတျခွငျး၊ နှလုံးသှေးကွောပေါကျခွငျး၊ သှေးကွော မြား ရုတျတရကျ ပေါကျခွငျးနှငျ့ လဖွေတျနိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ တှဲဖကျစားသုံးခွငျး မပွုဖို့တိုကျတှနျး လိုပါတယျ။
၂။ အပူမြားတဲ့ခန်ဒာကိုယျအဖှဲ့အစညျးရှိသူမြား၊ လညျခြောငျးနာခြောငျးဆိုးသူမြား၊ ဖြားနာသူမြား၊ လပွှေနျရောငျ ရောဂါရှိသူမြားအနဖွေငျ့ ဒူးရငျးသီးစားသုံးပါက ရောဂါ အခွအေနေ ပိုမိုဆိုးရှားတတျတာကွောငျ့ မစားသုံးသငျ့ပါဘူး။
၃။ ဒူးရငျးသီးစားသုံးခွငျးဟာ အပူမြားတတျခွငျးကွောငျ့ ဒူးရငျးသီးစားပွီးပါက ပဲစိမျးသာကူကြိူကို ဝမျးအေးစရေနျေ သောကျသုံး ပေးသငျ့ပါတယျ။
၄။ ဒူးရငျးသီးမှာ အပူဓာတျနှငျ့ သကွားဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတာမို့ အဝလှနျရောဂါရှိသူမြားနှငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျမြားသူမြား စားသုံးရနျမသငျ့ပါဘူး။
၅။ ပိုတကျစီယမျဓာတျအလှနျမွငျ့မားစှာပါဝငျတာကွောငျ့ နာတာရှညျ ကြောကျကပျမကောငျးသူမြား နှငျ့ နှလုံးရောဂါရှိသူမြားအတှကျ မသငျ့လြျောပါဘူး။
၆။ ဒူးရငျးသီးကိုတဈကွိမျစားတိုငျး အမြားအပွားမစားသုံးသငျ့သညျ့အပွငျ ဒူးရငျးသီးအနံ့မှာ အရကျနံ့ထှကျနပွေီဆိုရငျလညျး စားသုံးဖို့မသငျ့တော့ပါဘူး။
၇။ ဒူရငျးသီးထိပျပှငျ့နရေငျ အကွာကွီးထားရနျမသငျ့သညျ့အပွငျ အနံ့လညျး ပွောငျးလဲ
၇။ ဒူးရငျးသီးထိပျပှငျ့နရေငျ အကွာကွီးထားရနျမသငျ့သညျ့အပွငျ အနံ့လညျး ပွောငျးလဲတော့မှာဖွဈတာကွောငျ့ မဝယျယူသငျ့ပါဘူး။
၈။ ဒူးရငျးသီး စားသုံးပွီးခြိနျမှာ ရအေမွောကျအမြားသောကျသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒူးရငျးသီးအတှငျး အာဟာရဓာတျအလှနျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ အမွောကျအမြား စားသုံးခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျကိုဒုက်ခဖွဈစရေုံသာမက ဝမျးခြုပျနိုငျတာကွောငျ့ ထိနျးသိမျး စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ ဒူးရငျးသီးအမွောကျအမြားစားသုံးမိပါက မငျးကှတျသီးစားသုံးပေး ခွငျးဖွငျ့ အပူဓာတျကို လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒူးရငျးသီး ကွိုကျနှဈသကျကွသော သူမြားအနနေဲ့ ဆငျခွငျစားသောကျနိုငျဖို့ အန်တရာယျကငျးစခွေငျးအကျြိုးငှာ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ဒူးရင်းသီး ကြိုက်သူများ သတိပြုစရာ
အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုတ်’ ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ အစားအသောက် စားသုံးရာမှာ အခန့်မသင့်ရင် ဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရာသီစာဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အစားမတတ်ရင်ဘေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဆိုတာက အသီးတကာတို့ရဲ့ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်အောင် အနံ့အရသာ ပြည့်စုံရုံမျှမက အားအင်ဖြစ်စေနိုင်သော သစ်သီးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှား နိုင်ငံတို့မှနေပြီးအများဆုံးထွက်ရှိကာ လူကြိုက်များသော သစ်သီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒူးရင်းသီးဟာ စားတတ်ရင်အားအင်ဖြစ်ထွန်းသလို မစားတတ်ရင် မြွေထက်တောင် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အသီးလို့လည်း ပြောလို့ ရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်သွားရောက်သော နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး ဒူးရင်းသီးအစားမတတ်တာကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးသွားရသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်ဟာ အသက် ၂၉ နှစ်သာရှိသေးပြီး ဒူးရင်းသီးကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့် အများကြီး စားသုံးခဲ့ကာ နွားနို့ နှင့် ကော်ဖီကိုလည်း သောက်သုံးခဲ့သောကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒူးရင်းသီးနှင့် နွားနို့ပေါင်းစပ်လိုက်ပါကသွေးပေါင်ချိန်အလွန်တက်သွားပြီး ရှော့ခ်ဖြစ်ကာသေဆုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆေးစစ်ချက်များအရ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒူးရင်းသီးကို စားသုံးပြီး ၈-နာရီအတွင်း နို့ထွက်အစားအသောက်များကို မစားသုံးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒူးရင်းသီးနှင့်အတူ တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့ အစားအသောက်များကတော့ အရက်၊ ကိုကာကိုလာနှင့် လိုင်ချီးသီးများ ဖြစ်ပြီး စားသုံးမိပါက အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လုို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ? ဗဟုသုတရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဒူးရင်းသီးနှင့်အရက်တွဲဖက်မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နှစ်ခုစလုံး အပူစာတွေဖြစ်တာကြောင့် သာမန်လူများသာမက သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရှိသူများဆိုရင် ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောပေါက်ခြင်း၊ သွေးကြော များ ရုတ်တရက် ပေါက်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်နိုင်ခြင်းတုို့ကြောင့် တွဲဖက်စားသုံးခြင်း မပြုဖို့တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
၂။ အပူများတဲ့ခန္ဒာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းရှိသူများ၊ လည်ချောင်းနာချောင်းဆိုးသူများ၊ ဖျားနာသူများ၊ လေပြွန်ရောင် ရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် ဒူးရင်းသီးစားသုံးပါက ရောဂါ အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားတတ်တာကြောင့် မစားသုံးသင့်ပါဘူး။
၃။ ဒူးရင်းသီးစားသုံးခြင်းဟာ အပူများတတ်ခြင်းကြောင့် ဒူးရင်းသီးစားပြီးပါက ပဲစိမ်းသာကူကျိူကို ၀မ်းအေးစေရေန် သောက်သုံး ပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ ဒူးရင်းသီးမှာ အပူဓာတ်နှင့် သကြားဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာမို့ အ၀လွန်ရောဂါရှိသူများနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်များသူများ စားသုံးရန်မသင့်ပါဘူး။
၅။ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်အလွန်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့် နာတာရှည် ကျောက်ကပ်မကောင်းသူများ နှင့် နှလုံးရောဂါရှိသူများအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။
၆။ ဒူးရင်းသီးကိုတစ်ကြိမ်စားတိုင်း အများအပြားမစားသုံးသင့်သည့်အပြင် ဒူးရင်းသီးအနံ့မှာ အရက်နံ့ထွက်နေပြီဆိုရင်လည်း စားသုံးဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။
၇။ ဒူးရင်းသီးထိပ်ပွင့်နေရင် အကြာကြီးထားရန်မသင့်သည့်အပြင် အနံ့လည်း ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် မ၀ယ်ယူသင့်ပါဘူး။
၈။ ဒူးရင်းသီး စားသုံးပြီးချိန်မှာ ရေအမြောက်အများသောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးအတွင်း အာဟာရဓာတ်အလွန် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အမြောက်အများ စားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေရုံသာမက ၀မ်းချုပ်နိုင်တာကြောင့် ထိန်းသိမ်း စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးအမြောက်အများစားသုံးမိပါက မင်းကွတ်သီးစားသုံးပေး ခြင်းဖြင့် အပူဓာတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒုးရင်းသီး ကြိုက်နှစ်သက်ကြသော သူများအနေနဲ့ ဆင်ခြင်စားသောက်နိုင်ဖို့ အန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းအက်ျိုးငှာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပေအကျယ် (12.6x50) တိုက်ခန်း
ရောငျးရနျ တိုကျခနျး လှိုငျမွို့နယျ
မွောကျဒဂုံ Hall type ဈေးနှုနျးသငျ့အဌား...
လမျးမတျော တိုကျခနျး အငှား